कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका युवाले ओलीलाई ‘रेबिजको भ्याक्सिन’ दिने
July 3, 2021 N88LeaveaComment on कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका युवाले ओलीलाई ‘रेबिजको भ्याक्सिन’ दिने
झापाका पाँच विद्यार्थी संगठनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘रेबिजविरुद्धको भ्याक्सिन’ लगाउनु पर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली स्वयंको पनि गृह जिल्ला झापाको बिर्तामोडमा ती विद्यार्थी संगठनले र्‍याली प्रदर्शन गरेका हुन्। बुधबार साँझ निस्केको र्‍यालीले बिर्तामोड चोक परिक्रमा गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदीय मर्यादा बिर्सिएर जथाभावी बोल्न थालेको भन्दै विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्रीले रेबिजविरुद्धको […]
एमाले बैठक : ‘संघीयता र धर्मनिरपेक्षता’ खारेज गर्न प्रस्ताव
July 3, 2021 N88LeaveaComment on एमाले बैठक : ‘संघीयता र धर्मनिरपेक्षता’ खारेज गर्न प्रस्ताव
काठमाडाैं । नेताहरुको सिँगौरी र पार्टीको आन्तरिक कलहका काराण जनसमर्थन घट्दै गएपछि नेकपा एमाले भित्र ‘संघीयता र धर्मनिरपेक्षता’ को विषय उठाएर जनतालाई भ्रममा पार्ने खेल सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षिय केन्द्रीय कमिटी वैठकको अन्तिम दिन यो विषयले प्रवेश पाएको छ । औपाचारीक प्रस्तावका रुपमा नभएपनि एमाले केन्द्रीय सदस्य […]
शाहरुख खानकी छोरी जिममा फेला परिन्
July 3, 2021 N88LeaveaComment on शाहरुख खानकी छोरी जिममा फेला परिन्
मुम्बई । बलुउड अभिनेता शाहरुख खानकी छोरी सुहानाको जबरजस्त फ्यान फलोइङ छन् । बलिउडमा सबैभन्दा लोकप्रिय स्टार किड्समध्येकी एक सुहाना सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय रहन्छिन् । सुहाना यस समय न्यूयोर्कमा छिन् । बेलाबेलामा आफ्नो तस्वीर र भिडियोको माध्यमबाट फ्यानसँग सम्पर्कमा रहन्छिन् । स्टारकिडको विभिन्न समयमा आउने तस्वीरलाई उनका फ्यानहरुले मन पराउने गरेका छन् । सुहाना […]
July 3, 2021 N88LeaveaComment on ‘हिजो बिहानको बिहे आजसम्म बाटोमै छौं’, बेहुली भन्छिन, ‘पहिरोले बिहेकै दिन बिचल्लीको बनायाे’
काठमाडौं । स्याङ्जा टक्सारका कुलदीप पौडेल बेहुली लिन बिहीबार बिहान ९ बजे जन्तीसहित हिँडे। विवाहको साइतभन्दा उनी ढिलो पुगे। बेहुलीको घर भरतपुर महानगरपालिका–९ शरदपुर दिउँसो पुग्नुपर्नेमा मध्यरातको १२ बज्यो। विवाह कार्यक्रम सकेर बिहान ४ बजे फर्किंदा फेरि जाममा परे। पहिरो हटाएर बाटो खुल्ने पर्खाइमा रहेका नवदम्पतीले गाडीमै बसेर दिन कटाए। घरबाट जन्ती प्रस्थान गरेको ३६ […]
करोडौँ रुपैयाँ पारिश्रमिक लिने यी बलिउड स्टारको आफ्नै घर छैन, बस्छन् भाडामा कति तिर्छन् ?
July 3, 2021 July 3, 2021 N88LeaveaComment on करोडौँ रुपैयाँ पारिश्रमिक लिने यी बलिउड स्टारको आफ्नै घर छैन, बस्छन् भाडामा कति तिर्छन् ?
एजेन्सी । जब बलिउड सेलिब्रेटीहरुको कुरा आउँछ, तिनीहरूको प्रशंसकहरू उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनको बारेमा जान्न अत्यन्त उत्सुक हुन्छन् । स्वभाविक रुपमा तपाईँ हामीलाई पनि उनीहरुको बारेमा जान्ने इच्छा त लागिहाल्छ नै । कला क्षेत्रका चर्चित वा सफल ब्यक्तिहरु धेरैका लागि रोल मोडल नै पनि हुन्छन् त्यसैले प्रशंसकहरु आफ्नो जीवनमा सबै चीज अपनाएर उनीजस्तै हुन खोज्छन् । […]
निरुताको सम्झनामा श्रीकृष्ण र शिवः सेयर गरिन् सुटिङका पूराना तस्विरहरु रातारात भाइरल
July 3, 2021 N88LeaveaComment on निरुताको सम्झनामा श्रीकृष्ण र शिवः सेयर गरिन् सुटिङका पूराना तस्विरहरु रातारात भाइरल
सन् १९९९ को चर्चित फिल्म थियो आफन्त । चलचित्रका निर्देशक शिव रेग्मी थिए भने अभिनेता अभिनेत्रीमा त्याे बेलाका हिट जोडी निरुता सिंह र श्रीकृष्ण श्रेष्ठ थिए । केशव भट्टराईले निर्माण गरेको यो फिल्मले बक्सअफिसमा सुपरहिट प्रदर्शन गरेकाे थियाे । २२ वर्षपछि पनि यो फिल्म उत्तिकै कालजयी मानिन्छ । यो वर्षसम्म नेपाली फिल्ममा धेरै उतारचढाव आयो […]
बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्टको संघर्षको कथा, २६ वर्षकाे उमेरमै करोडपति (फोटो फिचर)
July 3, 2021 N88LeaveaComment on बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्टको संघर्षको कथा, २६ वर्षकाे उमेरमै करोडपति (फोटो फिचर)
सबैले मन पराउने चर्चित बलिउड अभिनेत्री हुन् आलिया भट्ट । बलिउडको सबैभन्दा बढी पारिश्रमिक लिने अभिनेत्रीमा आलिया पनि पर्छिन् । उनी २६ वर्षीय अलियाले वार्षिक ९ करोड ६० लाख कमाउने अनुमान गरिएको छ । उनीसँग ३५ करोडको सम्पत्ति पनि भएको जनाइएको छ । ब्रिटिश नागरिकता भएकी उनी सन् २०१४ देखि फोर्ब्स इन्डियन सेलिब्रेटीको सूचीमा पर्दै […]
पहिरोले घर पुरिँदा च्या’पिएर श्रीमान श्रीमतीको भयो एकै ठाउँमा चिहान RIP
July 3, 2021 N88LeaveaComment on पहिरोले घर पुरिँदा च्या’पिएर श्रीमान श्रीमतीको भयो एकै ठाउँमा चिहान RIP
काठमाडौं । केहीदिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण देशभरका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोले जनजीवन ब्यबापक रुपमा प्रभावित बनेको छ । गएराती गोरखामा पहिरोले पुरिएर एकैघरका दुई जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार सिरानचोक गाउँपालिका–७ उपल्लो गोहारेमा पहिरोले घर पु रिँदा च्या पिएर दम्पतीको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा ८६ वर्षीय रमन पाण्डे […]
थुइक्क भन्दै आफैंलाई गा-ली गर्दै निजामती सेवाबाट बिदा भए प्रेमप्रसाद सञ्जेल
July 3, 2021 N88LeaveaComment on थुइक्क भन्दै आफैंलाई गा-ली गर्दै निजामती सेवाबाट बिदा भए प्रेमप्रसाद सञ्जेल
विराटनगर । ‘थुइक्क मेरो ४० वर्षे सेवा, मेरो देशको नीति, विधि र प्रविधि, निजामती सेवा, मेरो नेता, कर्मचारी र म ।’ ४० वर्षे निजामती सेवा अवधी पूरा गर्दैगर्दा उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेलले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको आ- क्रो-श हो यो । ५८ वर्षे उमेरहदका कारण सञ्जेलले असार १५ गते अनिवार्य अवकास पाए । तर सुधारको प्रयत्न […]
July 3, 2021 N88LeaveaComment on लोक सेवाको परीक्षामा ३५ पटक फेल भएपछि…
एजेन्सी । सरकारी जागिर खाएर भविश्य सुरक्षित बनाउने सपना कसको नहोला र तर यो सपना सहजै सबैको पूरा हुँदैन । कतिपय पटक पटक प्रयास गर्दा पनि सफल हुँदैनन् । आमरुपमा भन्ने हो भने असफलताले मानिसलाई निराश बनाउँछ । बारम्बार हुने यस्तो निराशाले मानिसको आशा नै टुटाउँछ । तर विजय वर्धन नाम गरेका एक भारतीय युवाले […]